Waa kuma ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda Real Madrid oo uu ku daydo da’yarka Manchester United ee Daniel James? – Gool FM
Waa kuma ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda Real Madrid oo uu ku daydo da’yarka Manchester United ee Daniel James?
Haaruun October 7, 2019
(Manchester) 07 Okt 2019. Daniel James ayaa shaaca ka qaaday inuu u baahan yahay inuu horumar badan ka sameeyo qaabka uu haatan u ciyaaro, isla markaana uu sameeyo oo uu ku daydo habka uu kubadda u ciyaaro Eden Hazard.
Xiddiga reer Wales kaasoo Manchester United ugu soo dhaqaaqay adduun dhan 15 milyan oo gini suuqii xagaagan ayaa kooxdiisa u dhaliyey saddex gool illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Hazard ayaa isaga tagay horyaalka Premier League kaddib todobo sanadood oo uu ku sugnaa Chelsea, waxaana uu dhammaystiray ku biiristiisa kooxda Real Madrid.
Isagoo la hadlayey BBC kana hadlayey ciyaartoyda heerka sare ah ee isaga saameynta ku yeelatay waxa uu James yiri: “Qaabkii uu Hazard ku ahaa Chelsea, qaabkii uu gadaal ugu dhaqaaqi jiray, markii uu soconayo iyo markii uu taagan yahayba, waxa uu ahaa mid aad u xawaare badan, laakiin markii uu istaagayo oo dadka dhinac marayo ama uu kubadda gambinayo waxa uu arrintaas ku sameynayey qaab deg deg leh intii uu ku soo jiray ciyaarihiisa.”
“Marka aan galayo xerada ganaaxa, waa wax aan doonayo inaan sii horumariyo, marka Hazard uu sameynayo one-two (isku dhufsasho kow ama labo) ma heli kartid meel aad kaga soo dhowaato.”
“Markii aan yaraa dadku waxay dhihi jireen ma awoodid inaan xawaarahaaga ku tiirsanaatid, markaas waxaan ahaa mid kubadda laadi jiray oo garab mari jiray xiddigaha, kaddibna carari jiray, laakiin maalmahaan dambe arrintaasi ma dhacdo, marka ay dadku igu soo xoomaan.”
Tan iyo markii uu dhaliyey saddex gool afartii kulan ee ugu horreysay Man United, James ayaa gool la’aan ah lix kulan oo ay tan iyo markaas ciyaartay kooxdiisa, iyadoo naadiga ka arrimisa Old Trafford ay hadda labo dhibcood oo qura u jirto booska loogu laabto horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska.
Dhinaca kale Hazard ayaa furtay akoonkiisa goolasha Los Blancos intii lagu guda jiray kulankii ay 4-2 guusha kaga gaareen Granada, iyadoo haatan Real Madrid ay hoggaanka horyaalka La Liga ku hayso labo dhibcood.